Kumwe kudengenyeka kwenyika kukuru kunoitika muPapua New Guinea
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Kumwe kudengenyeka kwenyika kukuru kunoitika muPapua New Guinea
Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • Papua New Guinea Kupwanya Nhau • chengetedzo • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
US Geological Survey yakashuma kuti kudengenyeka kwenyika kukuru kwakaitika pamhenderekedzo yechitsuwa chePapua New Guinea cheNew Britain. Iyi inzvimbo imwechete yakarova kudengenyeka kukuru kwesvondo rapfuura.
Nzvimbo dzakakwirira dzePapua New Guinea dzakarohwa nekudengenyeka kwenyika kwakakura 7.5 mwedzi wapfuura uko kwakatora hupenyu hwevanhu vanosvika mazana masere nemashanu. Inofungidzirwa kuti kune vanhu mazana maviri nemakumi manomwe ezviuru vachiri kuda rubatsiro nekukurumidza rubatsiro.
Nzvimbo yekudengenyeka kwenyika iri makiromita zana nemakumi matanhatu neshanu kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweKokopo mudunhu reEast New Britain.
US Geological Survey yakashuma kuti tsunami masaisai anosvika pamita imwe anokwanisika kumahombekombe egungwa ePapua New Guinea uye anosvika makumi matatu masentimita kumatunhu ari mumahombekombe eSolomon Islands.